ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျရဖို့အတှကျ လြှိ့ဝှကျခကျြ (၅) ခကျြ။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျရဖို့အတှကျ လြှိ့ဝှကျခကျြ (၅) ခကျြ။
ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျရဖို့အတှကျ လြှိ့ဝှကျခကျြ (၅) ခကျြ။
လူအမြားစုဟာ ကနျြးမာပွီး အေးခမျြးတဲ့ဘဝမြိုးကို လိုခငျြပမေယျ့ အလုပျတာဝနျတှကွေောငျ့ စိတျနဲ့ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာအောငျ ကွိုးစားဖို့ အခြိနျမရတာမြိုးတှေ ကွုံနရေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သခြောတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခမြှတျကာ ကိုယျခန်ဓာကနျြးမာဖို့အတှကျ အခြိနျပေးပွီး ကွိုးစားလို့ရပါသေးတယျ။
အရေးကွီးဆုံးအခကျြကတော့ မိမိရဲ့လကျရှိနထေိုငျမှုပုံစံကို ပွောငျးလဲရမှာပဲဖွဈပွီး စနဈကတြဲ့ နထေိုငျမှုပုံစံအသဈကို အစီအစဉျဆှဲရပါမယျ။ အစီအစဉျဆှဲပွီးနောကျမှာတော့ ကိုယျခမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို လိုကျနာရမှာပဲဖွဈပွီး အပွောငျးအလဲပွုလုပျဖို့ဆိုတာကလညျး ထငျသလောကျ မလှယျကူပွနျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ပွောငျးလဲလုပျဆောငျပွီးရငျတော့ အခြိနျကွာလာတာနဲ့ နသေားကသြှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျရရှိနိုငျဖို့အတှကျ ဘယျလိုဘယျပုံနထေိုငျရမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားပါမယျနျော။
၁။ မနကျခငျးမှာ လမျးလြှောကျပါ။
မနကျခငျး စောစောစီးစီးထပွီး လမျးလြှောကျနိုငျဖို့အတှကျ ညဘကျမှာ အစောကွီးအိပျစကျဖို့ လိုပါမယျ။ မနကျခငျးမှာ လမျးလြှောကျခွငျးအားဖွငျ့ တဈနတေ့ာရဲ့ ကနျြရှိသေးတဲ့အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးနိုငျဖို့အတှကျ တကျကွှလနျးဆနျးနမှောပဲဖွဈပါတယျ။
၂။ အခြိနျပေးပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ။
တဈပတျမှာ ၇ ရကျလုံး လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျနိုငျဘူးဆိုရငျတောငျမှ ၄ ရကျလောကျတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အိမျမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ အားကစားရုံမှာပဲဖွဈဖွဈ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှာ အောငျးနတေဲ့ ခြှေးပုပျတှကေို ထှကျလာစပွေီး သှေးလညျပတျမှုကိုလညျး ကောငျးစတောကွောငျ့ ညဘကျမှာ နှဈခွိုကျတဲ့ အိပျစကျမှုကို ရရှိနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
၃။ အစားသောကျကို ဂရုစိုကျပါ။
နစေ့ဉျစားသောကျတဲ့ အစားအစာတှထေဲမှာ အစိမျးရောငျအသီးအရှကျတှေ၊ အစအေ့ဆံတှေ၊ အရိုးစှပျပွုတျတှနေဲ့ ပငျလယျစာတှကေို စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ စားသောကျဆိုငျတှမှော အလှယျတကူဝယျလို့ရတဲ့ အဆငျသငျ့စားသုံးလို့ရတဲ့ အစားအသောကျတှထေကျ လတျဆတျတဲ့ အသားငါး ၊ အသီးအရှကျတှကေို စားသုံးခွငျးက ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ကနျြရှိနတေဲ့ အညဈအကွေးတှကေို သနျ့ရှငျးစနေိုငျပါတယျ။
၄။ စောစောအိပျပွီး စောစောထပါ။
မကျြစိကွောငျစတေဲ့ ကျောဖီနဲ့ လကျဖကျတို့ကို ညအိပျခါနီးမှာ စားသုံးခွငျးကနေ ရှောငျကွဉျပါ။ အကယျ၍ မကျြစိကွောငျစတေဲ့ အစားအသောကျတှကေို မစားသောကျဘဲ အိပျမပြျောဘူးဆိုရငျတော့ အိပျပြျောစမေယျ့ Melatonin ဓါတျပါတဲ့ ဖွညျ့စှကျစာကို သောကျသုံးကွညျ့ပါ။ ညဘကျသနျးခေါငျကြျောမှ အိပျတာထကျ သနျးခေါငျမကြျောခငျ အိပျစကျပွီး မနကျစောစောထခွငျးဖွငျ့လညျး တဈနကေုနျ ခေါငျးကွညျနမှောပဲဖွဈပါတယျ။
အလုပျတာဝနျတှကွေောငျ့ စိတျမှနျးကွပျလာရတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ခဈြခငျရသူတှနေဲ့ အပြျောခရီးထှကျပါ။ လမျးတဈလြှောကျမှာ တှရေ့မယျ့သဘာဝအလှတရားကွီးကို ကွညျ့ရှုရငျး ၊ သနျ့ရှငျးလတျဆတျတဲ့လကေို ရှူရှိုကျရငျး ဘဝရဲ့အမောတှကေို ဖွဖြေောကျလိုကျပါ။
Soshwe ပရိသတျကွီးကို နောကျဆုံးပွောခငျြတာကတော့ ကနျြးမာတဲ့ဘဝပုံစံမြိုးမှာ ရှငျသနျနထေိုငျဖို့က မခကျခဲပါဘူး။ ကနျြးမာတဲ့ဘဝပုံစံကို စတငျပွောငျးလဲနထေိုငျဖို့ကသာ ခကျနတောပါ။ ပကျြအစဉျ ပွငျခဏဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုငျး အခြိနျယူပွီး ကနျြးမာတဲ့ဘဝကို စတငျတညျထောငျကွညျ့ကွပါနျော။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် လျှိ့ဝှက်ချက် (၅) ချက်။
လူအများစုဟာ ကျန်းမာပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကို လိုချင်ပေမယ့် အလုပ်တာဝန်တွေကြောင့် စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာအောင် ကြိုးစားဖို့ အချိန်မရတာမျိုးတွေ ကြုံနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ကာ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာဖို့အတွက် အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားလို့ရပါသေးတယ်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ မိမိရဲ့လက်ရှိနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရမှာပဲဖြစ်ပြီး စနစ်ကျတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်ကို အစီအစဉ်ဆွဲရပါမယ်။ အစီအစဉ်ဆွဲပြီးနောက်မှာတော့ ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာရမှာပဲဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ထင်သလောက် မလွယ်ကူပြန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ပြီးရင်တော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ နေသားကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်နော်။
၁။ မနက်ခင်းမှာ လမ်းလျှောက်ပါ။
မနက်ခင်း စောစောစီးစီးထပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ညဘက်မှာ အစောကြီးအိပ်စက်ဖို့ လိုပါမယ်။ မနက်ခင်းမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နေ့တာရဲ့ ကျန်ရှိသေးတဲ့အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် တက်ကြွလန်းဆန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်လုံး လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ၄ ရက်လောက်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားကစားရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ အောင်းနေတဲ့ ချွေးပုပ်တွေကို ထွက်လာစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း ကောင်းစေတာကြောင့် ညဘက်မှာ နှစ်ခြိုက်တဲ့ အိပ်စက်မှုကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အစားသောက်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ အစိမ်းရောင်အသီးအရွက်တွေ၊ အစေ့အဆံတွေ၊ အရိုးစွပ်ပြုတ်တွေနဲ့ ပင်လယ်စာတွေကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ အဆင်သင့်စားသုံးလို့ရတဲ့ အစားအသောက်တွေထက် လတ်ဆတ်တဲ့ အသားငါး ၊ အသီးအရွက်တွေကို စားသုံးခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။
၄။ စောစောအိပ်ပြီး စောစောထပါ။
မျက်စိကြောင်စေတဲ့ ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်တို့ကို ညအိပ်ခါနီးမှာ စားသုံးခြင်းကနေ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကယ်၍ မျက်စိကြောင်စေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို မစားသောက်ဘဲ အိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင်တော့ အိပ်ပျော်စေမယ့် Melatonin ဓါတ်ပါတဲ့ ဖြည့်စွက်စာကို သောက်သုံးကြည့်ပါ။ ညဘက်သန်းခေါင်ကျော်မှ အိပ်တာထက် သန်းခေါင်မကျော်ခင် အိပ်စက်ပြီး မနက်စောစောထခြင်းဖြင့်လည်း တစ်နေကုန် ခေါင်းကြည်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တာဝန်တွေကြောင့် စိတ်မွန်းကြပ်လာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ အပျော်ခရီးထွက်ပါ။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ တွေ့ရမယ့်သဘာဝအလှတရားကြီးကို ကြည့်ရှုရင်း ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့လေကို ရှူရှိုက်ရင်း ဘဝရဲ့အမောတွေကို ဖြေဖျောက်လိုက်ပါ။
Soshwe ပရိသတ်ကြီးကို နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျန်းမာတဲ့ဘဝပုံစံမျိုးမှာ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့က မခက်ခဲပါဘူး။ ကျန်းမာတဲ့ဘဝပုံစံကို စတင်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖို့ကသာ ခက်နေတာပါ။ ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း အချိန်ယူပြီး ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို စတင်တည်ထောင်ကြည့်ကြပါနော်။
Previous သငျ့ရဲ့အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို ရငျသှေးငယျလေးတှနေဲ့ အလှယျတကူ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျမှုရှိလာအောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျမလဲ ? ? ?
Next ရခေဲနတေဲ့ အန်တာတိတျပငျလယျပွငျကွီးအောကျမှာ ၈ မိနဈခနျ့ရကေူးနိုငျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျလူသား။